Ịga na nkịta - Ihe ị kwesịrị ichebara echiche
Tupu ị gaa nkịta
Ihe maka ụlọ ahịa ọgwụ
Kedu ihe dị n'ime akpa nkịta?
Ebe ọ bụ na ọ bụ n'ikpeazụ n'ime ezumike ezumike kwesịrị ekwesị, ma gịnị ka ọ ga-eme na ihu anụcha hụrụ n'anya? Ọ na-aghọwanye ndị na-ewu ewu iji kuru nkịta na nnukwu njem kama inyefe ya n'aka ndị enyi, ndị ikwu ma ọ bụ nkịta nkịta. Ma mgbe ị na-agagharị na nkịta aghaghị icheta ọtụtụ ihe!
E kwuwerị, ọtụtụ nkịta bụ ndị òtù ezinụlọ zuru oke. Banyere ezinụlọ nke ọ bụla na-eme atụmatụ ezumike nkịta kwa afọ, nke na-agbakwụnye ọtụtụ ihe na nzukọ na atụmatụ. Ihe ị kwesịrị ịṅa ntị na ihe a ga-eme ma kọwaa n'ihu ezumike, ị ga-ahụ ebe a.
Ọ bụrụ na onye na-achọghị ịhapụ ụlọ ọrụ amara nke enyi enyi anọ ahụ na ezumike na mba ndị ọzọ, onye kwesịrị ibu ụzọ chee banyere ebe kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị mba niile ruru eru ebe a. Nke mere na ọ bụghị naanị mmadụ, kamakwa nkịta nwere ike ịnụ ụtọ ezumike ahụ n'ụzọ zuru ezu, ya mere ị ga-eme ihe gbasara mkpa onye ọ bụla.
Maka nkịta, ọ na-atọ ụtọ mgbe ọ naghị ekpo ọkụ na mmiri. Na mgbakwunye, enwere ndò na nkịta a ga-enye ohere ịla ezumike na ebe gbara ọchịchịrị nke ụlọ ezumike ma ọ bụ ụlọ.
Ọ ga-amasị gị iji ezumike na ụlọ nkwari akụ, jụọ ya ozugbo ma ọ bụrụ na a na-enye ndị nkịta n'ụlọ nkwari akụ. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, nke a ga-ekwe omume maka obere ụgwọ.
I kwesiri ilebara ala anya. Nkịta ahụ ọ kwere ebe ahụ niile? Kedu iwu maka ịduzi nkịta na-etinye n'ebe ahụ? Kedu ka njem si aga - n'ụgbọala, ụgbọ oloko ma ọ bụ ọbụna ụgbọelu?
A gaghị eleghara ya anya ntinye chọrọnke nwere ike ịdịgasị iche site na mba ruo ná mba. Enwere ike ịchọta ozi ebe a na ebe nrụọrụ weebụ nke ọdụ ụgbọelu (ma ọ bụrụ njem ụgbọelu) ma ọ bụ Ụlọọrụ ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, nkịta aghaghị ịgba ọgwụ ma ọ dịkarịa ala 6 izu ole na ole gara aga megide rabies mgbe ị na-eme njem na mba ọzọ, a ga-ebugharịkwa paspọtụ pet.
Ugbua izu ole na ole tupu mmalite nke agụụ na-agụsi ike-maka ezumike, ị kwesịrị ị na-agwa gi onye na-agwọ ọrịa na-elekọta gị ma na-enweta nyocha zuru ezu. Ọ bụrụ na a chọrọ ka ịgba ọgwụ mgbochi dị ka ihe ntinye chọrọ n'ime mba ezumike ahụ, gwa nne gị ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ezi onye na-agwọ anụ ahụ ga-agwa gị mgbe ị na-akparịta ụka banyere ihe ize ndụ ọ bụla na ebe / na mba na-aga ma kọwaa ihe ị ga-eme iji mee ihe ọ bụla.
Karịa ụmụ anụmanụ na mba ndị ọzọ na-atụkarị egwu site na oria ndị na-erughị ka a ga-emeso na Germany. Leishmaniasis, heartworms na ehrlichiosis bụ nanị ole na ole n'ime anwụnta na ọrịa ndị na-akọrọ ndị nwere ike igbu ngwa ngwa. Na nke a: Nchebe ka mma karịa ndidi.
Mgbe ị na-akwakọba, ọ bụ ya mere ọ dịkwa mkpa ka ị gbakọta ọnụ obere ọgwụ, nke na-agụnye ọ bụghị naanị ọgwụ onye nke nkịta gị, kamakwa ụfọdụ ihe nwere ike ọ gaghị efu na ezumike:
- Nchebe anyanwu maka nkịta nkenke
- Tweezers, pinze bandeeji, compresses sterile
- Tinye akọrọ tweezers
- Anya na ntị ada
- mbadamba nkume unyi
- Electrolyte ntụ ntụ
- Ndepụta nke ndị veterinarians na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na ebe
Ee, obughi nani ihe mmadu choro ibu. Nkịta kwesịrị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na akpa akpa ya, nwere ihe niile ọ chọrọ maka ịnọ jụụ na obi ụtọ. Site na listi nchịkọta nke mbụ ị nwere ike ịme ngwa ngwa.
Ihe dị mkpa ebe a - N'adịghị ka anyị ndị chọrọ ịchọpụta ọtụtụ ihe ọhụrụ na ezumike - ihe ndị maara nke ọma na nkịta maara ma hụ n'anya n'ụlọ. Nke a na-eme ka ọ dịkwuoro nkịta mfe inwe mmetụta nke ọma pụọ ​​n'ụlọ.
Nkịta na ezumike
Na akpa nkịta mgbe ị na-eme njem na nkịta bụ:
- nri a na-emebu, na-emeso ọkpụkpụ
- Nri na ihe ọṅụṅụ
- Igbe nkata / ohiri isi / blanketị
- Na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ dị na ebe ndị dị jụụ
- Mmiri mmiri njem
- Ụlọ elu
- ụmụ anụmanụ na-eji egwuri egwu
- Paspọtụ paspọtụ
- Ntughari ndi ozo eji eme njem
- Gwa, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
- Leash, akwa, akwa
- Adreesị adreesị na adreesị nke ụlọ / nkwari akụ & nọmba ekwentị
- Kotbeutel, nkịta na-afụ mkpọrọ
- EU paspọtụ pet
- Asambodo mkpuchi akwụkwọ
- Nlekọta maka ube, anya na uwe
- jaket ndụ
Ị chere banyere ihe niile ka nkịta gị nwee mmetụta dịka ezumike dị ka ị na-eme? Echerela ndetu akwụkwọ ahụ na igbe ụgbọ okporo ígwè jikọtara ọnọdụ ụgbọ elu na paspọtụ pet na akpa?
Mgbe ahụ, anyị na-achọ ka ị bụrụ ezumike magburu onwe ya na nkịta!
Iyi nwa akwukwo na nkita
Ịgbanwe nkịta nkịta na obi
Esi agba nkịta
Ịgba aja nkịta
Na-agbanwe nkịta nkịta na nwa nkita